UK oo 1 Milyan Pond siineysa Maxbuus Guwantanamo - Wargane News
Home Somali News UK oo 1 Milyan Pond siineysa Maxbuus Guwantanamo
UK oo 1 Milyan Pond siineysa Maxbuus Guwantanamo
Dowlada UK ayaa sheegtay inay 1 milyan oo Pond oo magdhaw ah siin doonto nin heysta dhalashada dalkaasi oo muddo 13 sano ah ku xirnaa xabsiga Guwantanamo ee ku yaal jasiirada Kuba (Cuba).
Shaker Aamer oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Sucuudiga, ayaa horey ugu noolaan jiray dalka UK, wuxuuna sanadkii 2001 u guuray dalka Afghanistan isaga iyo qoyskiisa. Wuxuuna sheegay inuu halkaasi iskuul ka furay.
Balse Maraykanka oo ninkan kasoo qabtay dalka Afghanistan ayaa ku eedeeyey inuu kamid yahay Al Qacida, isla markaana uu tarjumaan u ahaa Osama Bin Ladin, waxaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu yaqaan sida bambaanoyinka loo sameeyo, ninkan ayaa la sheegay inuu xiriir dhaw la lahaa xubnaha Al Qacida ee ku sugan dalalka Maraykanka iyo UK.
Raysalwasaaraha UK David Cameron ayaa bishii lasoo dhaafay ee Janaayo, dowlada Maraykanka ka codsaday in ninkan lasii daayo. Maraykanka ayaa ogolaaday inuu siidaayo muwaadinkaasi.
Lacagta Magdhawda ah oo lasiinayo ninkan maxbuuska ku ahaa 13 sano xabsiga Guwantanamo ayaa ah mid dowlada UK dooneyso inay uga hortagto in ninkaasi markii lasoo daayo uu maxkamada la tiigsado dowlada UK oo markaasi ku khasbanaan karta inay faah faahiso qaabka ay sirdoonkooda ulla shaqeeyaan Maraykanka.
Dowlada UK ayaa horey sidan oo kale lacago u siisay maxaabiistii uu dhashay UK ee horey looga soo daayey xabsiga Guwantanamo, wallow Shaker Aamer uu yahay muwaadinkii Ingiriiska ee xiliga ugu dheer u xirnaa xabsigaasi Maraykanka maamulo.
Somaliland: Daawo Garabka Murrashaxa Xisbiga UCID Oo Sheegay Inay Mar Kale Dacwad U Gudbinayaan Maxkamadda Sare.